Iyo General Chipatara cheVanhu's Liberation Army - Shenzhen Doneax Science uye Technology CO., LTD
Iyo General Hospital Yevanhu Yerusununguko Mauto
Iyo General Hospital yePeople's Liberation Army (PLAGH) yakavambwa mu1953, yakazvimisikidza pachayo kuita chipatara chikuru chemazuvano chine matarenda ehunyanzvi akawanda, zvese zvekurapa zvekurapa, zvigadzirwa zvemhando yepamusoro uye zvakasarudzika, zvakananga pasi iwo mubatanidzwa wezvigadzirwa zvinotsigira simba reChinese People's Liberation Army. Chipatara chinhu chakakosha chekuchengetedza hutano chevashandi vanobva kuhurumende yepakati. Iri basa rekurapwa kwemakomisheni emauto, dzimbahwe nemamwe mauniti, kurapwa kwevakuru vakuru nemasoja, kupihwa kwekuchinjisa kurapwa kwemauto akasiyana, kuongororwa uye kurapwa kwezvirwere zvisingarapike. Chipatara ichi zvakare chikoro chekurapa cheVanhu's Liberation Army. Zvinyorwa zvaro zvekudzidzisa zvinonyanya kuve dzidzo yepamusoro. Ndiwo wega unodzidzisa unofambiswa nechipatara mumauto ese.
Zvinoenderana neruzivo rwewebsite yepamutemo yechipatara muna Zvita 2015, muchipatara, parizvino pane madhipatimendi emakiriniki nevekurapa zana nemakumi manomwe nematanhatu, zvikamu makumi maviri nezvitatu zvevanamukoti, madhipatimendi akakosha emunyika, 1 National Key laboratory, makumi maviri ematunhu nemakurukota. emauto-chikamu makirabhoritari anokosha, makumi matatu emauto anokosha ekurapa uye ekutsvagisa masangano, achiumba gumi nematatu mabhenefiti ehunyanzvi anozivikanwa nekuongororwa kwakazara uye kurapwa. Panguva imwecheteyo, inzvimbo yekuratidzira yakasimba yeuto rese uye hwaro hwekudzidzira hweChinese Nursing Society. Kune epasi rese ekurapa nzvimbo uye ehutano ekurapa nzvimbo, ichipa yakakwira-magumo ekudzivirira ehutano mabasa. Gore rega rega, vanopfuura mamirioni 4.9 varwere vanoda kurapwa kwekukurumidzira vanouya kubazi revanorapa kunze kwechipatara. Kunze kwezvo, inogamuchira vanhu zviuru makumi masere nesere pagore, uye mabasa angangoita makumi mapfumbamwe nepfumbamwe anoitwa.
Chipatara chine vadzidzi vechishanu veChinese Academy yeUinjiniya, vanopfuura zana nyanzvi dzehunyanzvi pamusoro pechikamu chechitatu, uye vanopfuura chiuru chevashandi vehunyanzvi uye vehunyanzvi vanogamuchira Yepamusoro Vocational Dzidzo. Chipatara chakakunda zvinopfuura chiuru chimwe nemazana matatu ezviuru zvesainzi uye tekinoroji mibairo padanho repamusoro uye padunhu, kusanganisira mibairo yekutanga mitanhatu yekufambira mberi kwesainzi uye tekinoroji, mibairo yechipiri makumi maviri, mibairo miviri yenyika, uye makumi maviri nemaviri ekutanga mibairo yesainzi uye kufambira mberi kwesainzi.
Zvinoenderana neruzivo rwewebhusaiti yepamutemo yechipatara muna Zvita 2015, chipatara chine 165 yemakiriniki uye ehunyanzvi hwekurapa madhipatimendi uye mazana maviri nematatu evanamukoti. Kune epasi rese ekurapa nzvimbo uye ehutano ekurapa nzvimbo kuti ape epamusoro-magumo ekudzivirira uye ehutano ekuchengetedza mabasa.
Sayenzi yekutsvaga chikuva
Zvinoenderana neruzivo rwewebsite yepamutemo yechipatara muna Zvita 2015: Muchipatara, pane 1 yenyika kirabhoritari yakakosha, 2 makuru maLabhoritari e Ministry of Dzidzo, 9 makuru marabhoritari eBeijing, gumi nemaviri marabhoritari makuru ekurapa kwechiuto, 1 yenyika kiriniki yemishonga yekutsvagisa nzvimbo, uye 1 yepasi rose yakabatana yekutsvagisa nzvimbo, ichiumba gumi nematatu mabhenefiti ehunyanzvi ane yakazara kuongororwa uye kurapwa.
Zvinoenderana neruzivo rwewebsite yepamutemo yechipatara muna Zvita 2015: Chipatara chakatsigira makumi maviri nemaviri emagazini eChina sainzi uye tekinoroji, uye rimwe bhuku rakaverengerwa neSCI.